Denizli ပျံသန်းမှုနာရီနေ့အစီအစဉ်မှ cable ကိုကား - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ20 DenizliDenizli ပျံသန်းမှုနာရီနေ့အစီအစဉ်မှအဆိုပါကေဘယ်လ်ကား
10 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 20 Denizli, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, ကောင်းကင်ကြိုး, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, TELPHER 0
duzenlemesi စားသောက်ရန် denizlide ကေဘယ်လ်ကားအချိန်ဇယား
မနက်စောစော Al-Adha ခံရသောပွဲအပေါ်ကိုပိုမိုအချိန်ဖြုန်းဖို့နိုင်ငံသားတွေသေချာစေရန်, cable ကိုကားတစ်စီးကုန်းပြင်မြင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်ပေး Denizli Bağbaşıအလုပ်ချိန်အတွင်းမှာပွနျလညျဖှဲ့စညျးခဲ့သညျ။
Denizli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့သစ်တောBağbaşıကုန်းပြင်မြင့်အတွက်ကေဘယ်လ်ကားလိုင်းနှင့်အတူဝန်ဆောင်မှုစတင်အနစ်နာခံ၏ပွဲအဘို့ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခဲ့သည်။
နိုင်ငံသားများ၏အထူးပွဲနေ့အတွက်အားလပ်ရက်စဉ်အတွင်းစက်ရုံများ၏အလုပ်ချိန်အတွင်းပြောင်းလဲမှုသို့သှားကွ၏ cable ကိုကားတစ်စီးအဘို့ကြီးသောစိတ်ဝင်စားမှုပြသသည်။ Denizli ကေဘယ်လ်ကားသစ်ကိုအစီအစဉ်ကြေငြာခဲ့သည်နှင့်အတူ header ကို '' Day ကိုကျနော်တို့ကအလုပ်လုပ်ဆက်လက် '' ။
xnumx.g ရဲ့ (တနင်္ဂနွေသြဂုတ်လ 1)
xnumx.g ရဲ့ (တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 2)
3 ။ နေ့ (အင်္ဂါနေ့သြဂုတ်လ 13)
4 ။ နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သြဂုတ်လ 14)
အဆိုပါကေဘယ်လ်ကြိုးကားကို Denizli, Denizli ၏မြို့မှာရှိတဲ့ကေဘယ်လ်ကြိုးကားတူရကီရဲ့မျဉ်းကြောင်း။ Cableway 1.500 မီတာရှည်လျားအတူ Aegean ဒေသအတွက်အရှည်ဆုံးကေဘယ်လ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကုန်းပြင်မြင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးbağbaşı။ အောက်ခြေဘူတာအမြင့် 300 မီတာ 1.400 မီတာရောက်ရှိသောအထက်ဘူတာရုံ, နေစဉ်။
တပ်မတော်စည်းမျဉ်းဥပဒေ Boztepe Cableway နေ့နာရီ 23 / 06 / 2017 နေ့အစီအစဉ်၏ကြည်းတပ် Boztepe cable ကိုကားတစ်စီးနာရီ: ORBEL Inc ကို, ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏လက်အောက်ခံ မနက်စောစော Al-Fitr ၏ကြည်းတပ်-operated Boztepe ထို့ကြောင့်လိုင်းကေဘယ်လ်ကားဝန်ဆောင်မှုနာရီအားဖြင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောခဲ့တာ။ ရွှေ cable ကိုကားတစ်စီးအခန်း, ပွဲခံခြင်း2နှင့်အတူမြို့လယ် 350 28 1 ထံမှ Boztepe မီတာအကြားတထောင်န်ထမ်းခဲ့သည်။ 14.00 24.00,2၏နာရီအကြားရက်။ နှင့်3။ အဆိုပါနေ့က 10.00 24.00 ၏နာရီအကြားအစေခံပါလိမ့်မယ်။
Bursa အတွက်နာရီပေါင်း cableway ဆောင်းဦးရာသီ Arrangement 14 / 09 / 2018 တူရကီရဲ့ Uludag သတိပေးအရေးကြီးဆုံးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားစင်တာများနှင့်သဘာဝတရား၏တဦးတည်း လာ. , ပါလိမ့်မည်သူကိုကေဘယ်လ်ကြိုးကား။ 140 500 တစ်နာရီလျှင်တထောင်ခရီးသည်, Cabin တစ်ဦးတင်ဆောင်လာသောစွမ်းရည်နှင့်အတူ,9နှင့်အတူကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးကေဘယ်လ်ကားလိုင်း Uludag နှင့်အတူမြို့လယ်ကြားကအခြားရွေးချယ်စရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေး cable ကိုကားတစ်စီး၏ Re-အလုပ်ချိန် updated ကီလိုမီတာ။ Bursa အဖြစ်ကနေကေဘယ်လ်ကားဖြင့်ကြေညာချက်, 17-09.00 19.00 စက်တင်ဘာလနာရီကနေအစေခံပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကေဘယ်လ်ကြိုးကားနွေရာသီနာရီ 09.00-21.00 ခရီးသည်တင်ဆောင်ခဲ့သည်။
Uludag cableway နာရီခရစ္စမတ်အစီအစဉ် 28 / 12 / 2018 Uludağကိုသွားချင်တဲ့သူများအပန်းဖြေမှုအတွက်ကေဘယ်လ်ကားဂွန်ဒိုလာလှေမှာတူရကီရဲ့အရေးအပါဆုံးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနှင့်ခရစ္စမတ်ညသဘာဝခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်တာများတဦး xnumx'y သည်အထိ run ပါလိမ့်မယ်။ Uludağကိုသွားချင်တဲ့သူများနိုင်ငံသားတွေက, နှင်းလျှောစီး LIFT မှစုပြုံရှည်လျားစီတန်းဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်တူရကီနိုင်ငံရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားလုပ်ငန်း၏အရေးအပါဆုံးစင်တာများတဦး။ 02.00 176 Cabin နှင့်အတူနာရီစွမ်းရည်နှုန်းတထောင်ခရီးသည်, 500 သစ်ကိုတစ်နှစ်စစ်ဆင်ရေးနာရီတိုးချဲ့ Bursa ၏ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးကေဘယ်လ်ကားလိုင်းတိုက်ရိုက် teleleferig အတူကီလိုမီတာ။ Bursa Ersoy အိုကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုလက်ထောက်, "ကျနော်တို့ Uludag အတွက်နှစ်သစ်ကူးရိုက်ထည့်ရန်ဆန္ဒရှိတော်မူသောငါတို့၏နိုင်ငံသားများများအတွက်အလုပ်လုပ်နာရီတိုးချဲ့။9နာရီဒီဇင်ဘာလ xnumx'y ၏ညဦးတိုင်အောင် ...
Denizli နွေရာသီနာရီညှိယူအတွက်ကေဘယ်လ်ကား 20 / 04 / 2018 အပြောင်းအလဲများ Denizli အတွက်လေ့လာရေးခရီးနာရီကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ cable ကိုကားတစ်စီးပြီးနောက် Denizli ညနေခင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်။ အဆိုပါဂွန်ဒိုလာလှေ Denizli မြူနီစီပယ်ရဲ့Bağbaşıကုန်းပြင်မြင့်တိုးချဲ့ထားပြီးထိုကာလ၏ကြာချိန်။ နယူး applications များယနေ့စတင်လုပ်ဆောင်ပါပြီ။ Bağbaşıကုန်းပြင်မြင့်နှင့်အတူစီးတီးသစ်တောထဲမှာကေဘယ်လ်ကားလိုင်းအတွက်အောက်တိုဘာလအတွင်းဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း Denizli မြူနီစီပယ်ရဲ့ 2015 နှစ်ပူနွေးသောရာသီဥတုနှင့်အတူအချိန်နာရီပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားများထိုရက်သတ္တပတ်၏အဆုံးမှာအကြီးအတိုး, အထူးသဖြင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုပြသသည်အစီအစဉ်သစ် 20 10.00, ဧပြီကနေတစ်ပတ်ကာလအတွင်းနံနက်ယံ၌အချိန်ကိုစတင်ရန်ညဉ့် xnumx't အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ တနင်္ဂနွေများအတွက်အချိန် 21.00-09.00 နာရီအကြားကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ယင်းကုန်းပြင်မြင့်ကိုစောငျ့ရှောကျ Denizli အခွင့်အလမ်း၏မြို့အစီအစဉ်သစ်Bağbaşı ...
Erzurum ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်အတွက်ဿွာန်၏ hours 05 / 05 / 2019 Erzurum အတွက်ဥပုသ်လ၏လ၌အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအမံမိုဃ်းလင်းငွေစုအချိန်၏အဆုံးအထိမ်းအမှတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကြောင့်မြို့ပြအကူးအပြောင်းလိုင်းများအတွက်နိုင်ငံသားများမှဥပုသ်လ၏လမတိုင်မီ Sahur, tarawih, ဿွာန်လှုပ်ရှားမှုများ, လူမှုရေးလုပ်ငန်းများနှင့်သူတို့စျေးဝယ်အစီအစဉ်များနောက်ဆုံးအချိန်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်နာရီပေါင်းအချိန်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား။ ထို့ကြောင့် G7, B2, B3, G4 နောက်ဆုံးအချိန်နှင့်အချိန်လိုင်းများ G5 24: 00, B1, G1, G9, နောက်ဆုံးသောအချိန် G7 လိုင်း 23 အတွက်နာရီ: 30 အဖြစ် Created ။ အရာရှိများရှိသမျှသည်အခြားသောလိုင်းများနာရီနှင့် Erzurum တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက်နောက်ဆုံးသောကာလအကြောင်းကိုအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကို ulasim.erzurum.bel.t အဘို့, နိုင်ငံသားများ www.erzurum.bel.t ဝဘ်စာမျက်နှာကနေအကြိုးပွုနိုငျသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက် Erzurum တဲ့ Metropolitan တွင် ...
နှစ်သစ်ကူး Tariff Samulaşကနေတောင်တက်နာရီ 31 / 12 / 2013 နှစ်သစ်ကူး Tariff ထံမှလွန်းနာရီSamulaş: အလင်းရထားစနစ်အော်ပရေတာSAMULAŞပုံမှန်နှစ်သစ်ကူးရဲ့ဧဝကိုအထိမ်းအမှတ်ကာလ၌အသစ်သောအစီအစဉ်များဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အလင်းကိုရထားစနစ်အော်ပရေတာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတွက်အချိန်အထိမ်းအမှတ်SAMULAŞနှစ်သစ်ကူးအကြိုနှင့်အတူသစ်ကိုအစီအစဉ်များကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါsamulaşကနေကြေညာချက်အရဇန်နဝါရီလ 31 အင်္ဂါနေ့ညဥ့်ပေါ်လာတာဟာအရင်အဆိုပါအမြန်ဘို့အချိန်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီး xnumx't 23.45 သည်အထိတိုးချဲ့ထားပြီးယင်း xnumx't 01.00 ၏ပြီးစီးသည်အထိပုံမှန်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ရန်။ ဓါတ်ရထားနှင့် Express ကိုလျှောက်ထား xnumx't စံအချိန်ဇယားအောက်ပါလျှောက်ထားခံရဖို့အဖြစ်ရက်နှင့်နာရီအကြာတွင်လုပျဆောငျဖို့အင်္ဂါနေ့ကဒီဇင်ဘာလ 23.00 00.00 နာရီလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။ üniversitestat-လမ်းဆုံ-တက္ကသိုလ် 31-2013-23.00 23.00-23.0022.00-22.00 23.18-23.1822.20-22.20-23.30 23.3022.40-22-40 23.45-23.4523.00-23.00 00.00-00.0023.30-23.30 00.15-00.1500.00 Express ကိုဓါတ်ရထားဘူတာ ...
ဿွာန် setting Adana မက်ထရိုအချိန်ဇယား 17 / 07 / 2014 Adana မက်ထရိုဿွာန် setting ကို timetables: ဿွာန် 23 စဉ်အတွင်းမြေအောက်ရထားလေ့လာရေးခရီး၏ညဉ့်တွင် Adana တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ပြင်းထန်သောဆန္ဒ၏နိုင်ငံသားများ၏တောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်: 00 အလုံအလောက်uzattı.uygulပေမယ် 17.07.2014 နှင့် 21 အပေါ်စတင်ရန်: 00-23: 00 နာရီအကြား 15 မိနစ်ကြားကာလနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါလိမ့်မည်။
bursara နှစ်သစ်ကူးရဲ့တောင်တက်နာရီချိန်ညှိခြင်း 29 / 12 / 2016 bursara ခရစ္စမတ်ပြင်ဆင်မှုအားရန်ကြိုပို့နာရီ: Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, xnumx'y နဲ့တနင်္ဂနွေညဦးယံအချိန်ဟာစနေနေ့ဒီဇင်ဘာလ 2016 2017 ဇန်နဝါရီလချိတ်ဆက် xnumx'y ၏လုံခြုံနှင့်ငြိမ်းချမ်းသောနိုင်ငံသားများရှိသည်နိုင်ရန်အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအမျိုးမျိုးတို့ကိုယူကြ၏။ မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Recep Altepe, Bursa, ထူးချွန်တစ်လောကလုံးတန်ဖိုးကိုတစ်မြို့တှငျနထေိုငျ၏အခွင့်ထူးဟု "Bursa, တန်ဖိုးထားခြင်းနှင့် 31 featured ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အတူတစ်နှစ်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ဒီတော့ဝေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အားကစား, သမိုင်းအများအပြားစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အထိဖြစ်ပါတယ်သဘောပေါက်လာတယ်။ Bursa အတွက် 1 မှာတော့အမြဲအဖြစ်, '' ကျနော်တို့ကပထမဦးဆုံးနှင့်အတူတက် လာ. မြို့တမြို့ဖြစ်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ လူအပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားများ၏ကျန်းမာရေး xnumx'n ...
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ပွဲစဉ်ကိုဆက်တင်က Metro Shuttle နာရီ 26 / 08 / 2018 အစ္စတန်ဘူလ်က Metro အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် affiliates, ယနေ့နှင့်မနက်ဖြန်ရဲ့ပွဲစဉ် 01.00 နာရီအထိအချိန်ရှည်ဤအရပ်မှအားလုံးလိုင်းများပေါ်တွင်ကစားပါလိမ့်မယ်။ Metro အောက်ပါအတိုင်းမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့တွစ်တာအကောင့်မှကြေညာခဲ့သည်: "ခရီးသည်များ, Antalyaspor vs Besiktas မှာ 26 သြဂုတ်လတနင်္ဂနွေ xnumx't နှင့် 21.45 တနင်္လာနေ့ကစားပါလိမ့်မည်, 27 သည်အထိသြဂုတ်လနာရီကြာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်နာရီအားလုံးလိုင်းများပွဲဂါလာတာ-Alanyaspor xnumx't ကစားပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် တိုးချဲ့ပါလိမ့်မည်။ အကြှနျုပျတို့သညျကြှနျတျောတို့တစျခုလုံးကိုအသင်းကောင်းတစ်ခုခရီးနှင့်အောင်မြင်မှုအလိုရှိ၏။ "
ဓါတ်ရထားတောင်တက် Eskisehir ဖို့အစီအစဉ်သစ်ကိုချောင်းမြောင်း 26 / 05 / 2018 ESTRAM လာမည့်ဗဟိုဘတ်စ်ကားဘူတာရုံမှတည်ရှိသောလှုပ်ရှားမှု Center ကအပြင် Tepebasi န်ဆောင်မှုအတွက်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ပေါ်လာတာဟာအရင်အသစ်တစ်ခုလှုပ်ရှားမှုပေးထားပါတယ်။ အသစ်အစင်တာနှင့်အတူBatıkent- SSK နှင့်ကြိမ်နှင့်အတူပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးအချိန်Çamlicaအချိန်လမ်းရထားလမ်းကြောင်းများအတွက်လူမှုဖူလုံရေးအပြောင်းအလဲများကိုသွားခြင်းဟာလမ်းရထားကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ငါ ESTRADA ပါတိတ်ဗဟိုဧရိယာအတွင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်ညတွင်းချင်းမေလ 28 2018 တနင်္လာနေ့အဖြစ်ရရှိနိုင်ဖြစ်လာ။ ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံ-ပါတိတ်, ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံ-Çamlica, Batıkent-ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံကနောက်ဆုံးအချိန်တွင် ESTRADA ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖွငျ့အစီအစဉ်များနှင့်အတူÇamlica-ဘတ်စ်ကား tramway အတွက်လုပ်ဆောင်, ပါတိတ်အတွက်အချိန်နံနက်အစောပိုင်းကစတင်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ဤအချိန်ပါတိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်နေ့ချင်းညချင်း Center ကဖျက်သိမ်းခဲ့သည် ...
Sivas အတွက်လမ်းလျှောက်အဘို့အအသိဉာဏ် signal စနစ်
တပ်မတော်စည်းမျဉ်းဥပဒေ Boztepe Cableway နေ့နာရီ
Bursa အတွက်နာရီပေါင်း cableway ဆောင်းဦးရာသီ Arrangement
Uludag cableway နာရီခရစ္စမတ်အစီအစဉ်
Erzurum ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်အတွက်ဿွာန်၏ hours
နှစ်သစ်ကူး Tariff Samulaşကနေတောင်တက်နာရီ
ဿွာန် setting Adana မက်ထရိုအချိန်ဇယား
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ပွဲစဉ်ကိုဆက်တင်က Metro Shuttle နာရီ
ဓါတ်ရထားတောင်တက် Eskisehir ဖို့အစီအစဉ်သစ်ကိုချောင်းမြောင်း